Politika Fiarovana Fiainana - Fialam-boly
Fitness Rebates dia manadino ny fiainanao manokana. Ity politika miafina ity dia mamaritra ny fampahalalana momba ny tenantsika manokana sy ny fomba ampiasantsika azy. Jereo ity politika mba hianatra bebe kokoa momba ny politikan'ny privacy amin'ny ankapobeny.
Información Información Routine
Ny tranonkala rehetra dia manohy ny fanazavana fototra momba ny mpitsidika azy. Ity fampahalalana ity dia ahitana, fa tsy voafetra ny, adiresy IP, tsipirian'ny tranonkala, timestamps ary pejy mifandraika. Tsy misy an'io fampahalalana io afaka mamaritra manokana ireo mpitsidika manokana amin'ity tranonkala ity. Ny vaovao dia manaraka ny fitantanana sy ny fisokafan'ny fomba mahazatra.
Raha ilaina dia mampiasa cookies ny Fitness Rebates mba hitazonana ny mombamomba ny safidin'ny olona sy ny tantara, mba hahafahany manompo tsara kokoa ny vahiny sy / na manolotra ny votoaty maoderina.
Ny mpivarotra dokam-barotra sy ny antoko fahatelo dia mety mampiasa cookies, scripts and / or web beacons mba hanarahana ny mpitsidika ny tranonkalanay mba hampisehoana dokam-barotra sy vaovao hafa mahasoa. Ny fikarohana toy izany dia vita mivantana avy amin'ny antoko fahatelo amin'ny alàlan'ny serviteurs azy manokana ary mifehy ny politika manokana.
Sarotra ny fiainanao
Mariho fa azonao atao ny manova ny tranokalan'ny tranonkalanao hanala ny cookies raha manana olana manokana ianao. Ny famafana cookies ho an'ny tranonkala rehetra dia tsy voatery satria mety hanelingelina ny fampiasanao tranonkala sasany. Ny safidy tsara indrindra dia ny manala na mametraka cookies eo amin'ny fototra. Tsidiho ny antontan-taratasy fitahirizam-bokinao momba ny fomba hanakanana cookies sy ny fomba fitiliana hafa. Ity lisitry ny fitantanana ny fiainan'ny tranokala Internet Azo ampiasaina koa ny rohy.
Fanamarihana manokana momba ny Google Advertising
Ny dokam-barotra izay ampiasain'ny orinasa Google, Inc., sy ny orinasam-pifandraisana dia azo fehezina amin'ny fampiasana cookies. Ireo cookies ireo dia mamela an'i Google haneho ny doka mifototra amin'ny fitsidihana anao amin'ity tranokala ity sy ireo tranonkala hafa izay mampiasa ny tolotrasa Google. Mianara manao ahoana miala amin'ny fampiasana cookie an'i Google. Araka ny voalaza etsy ambony, ny fanaraha-maso atao amin'ny Google amin'ny alalàn'ny cookies sy ireo rafitra hafa dia mety amin'ny politikan'ny tsiambaratelo Google.
Ny ahiahy na fanontaniana momba ity politika momba ny tsiambaratelo ity dia azo alaina amin'ny fitnessrebates@yahoo.com mba hanazavana bebe kokoa.
Ity tranonkala ity dia mety hahazo valisoa ho an'ny fividianana avy amin'ny rohy mifandray. Ny tompon'ity vohikala ity, www.fitnessrebates.com, dia mpandray anjara amin'ny Programan'ny Affiliate Amazonas, Linkshare, ary CJ.com, izay natao hanomezana fitaovana ho an'ny tranonkala hahazoana saram-pandraharahana amin'ny alalan'ny fampifandraisana ireo vokatra na serivisy.
Famaritana ny fifandraisana amin'ny fitaovana:
Ny sasany amin'ireo rohy amin'ny lahatsoratra dia "rohy mampifandray." Midika izany raha tsindrio ny rohy ary mividiana ny singa / tolotra, ity vohikala ity dia mety mahazo komitin'ny sampandraharaha. Ireo rohy ireo dia mety mampiasa rindrambaiko fanaraha-maso fahatelo. Midika izany fa raha mividy rohy ianao ary mandeha mitsidika ilay tranonkala, dia misy cookie iray napetraka ao amin'ny tranonkalanao, izay hahatonga ity tranonkala ity hahazo "com" raha hividy entana iray ianao.
Na izany na tsy izany, FitnessRebates.com dia manoro hevitra fotsiny ny vokatra na ny serivisy izay inoantsika fa hampisy vidiny ny mpamaky antsika. Mamelabelatra izany izahay amin'ny fehin-kevitry ny 16 CFR, 255 momba ny Trade Trade Federal: "Fomba entina hampiasana ny fanomezan-toky sy ny fijoroana vavolombelona."
Fijerin'ny Amazon Affiliate Disclosure:
Fitness Rebates dia mpandray anjara ao amin'ny Programa Amazon Services LLC Associates, drafitry ny dokam-barotra afiliana natao hanomezana fitaovana ho an'ny tompon'ny tranonkala hahazoana ny saram-pandraharahana amin'ny alàlan'ny dokam-barotra sy ny fifandraisana amin'ny amazon.com ary ny tranonkala hafa izay mety misy ifandraisany amin'ny Amazon Service LLC Associates Program
CJ, ShareASale, fampahafantarana avy amin'ny Clickbank Affiliate Disclosure:
Fitness Rebates dia mandray anjara amin'ny programa CJ (Commission Junction), ShareASale, ary Clickbank, ary mety omena vola ianao raha mividy vokatra / serivisy na fisoratana anarana ho tolotra aorian'ny fikitihana rohy iray avy amin'ny tranokala Fitness Rebates. Fanamarihana: ny programa Affiliate Junction & ShareASale dia mampiroborobo vokatra sy serivisy maro an'isa marobe avy amin'ny orinasa maro samihafa.
DoubleClick lokony Cookie:
Google, amin'ny maha mpivarotra antoko fahatelo azy, dia mampiasa cookies hanaterana doka ao amin'ny www.fitnessrebates.com. Ny fampiasan'i Google ny cookie DART dia ahafahany mandefa doka amin'ny mpampiasa miankina amin'ny fitsidihan'izy ireo ny www.fitnessrebates.com sy tranokala hafa amin'ny Internet. Ireo mpampiasa dia afaka miala amin'ny fampiasana ny cookie DART amin'ny alàlan'ny fitsidihana ny doka momba ny fiainana manokana sy doka amin'ny tambajotra Google amin'ny URL manaraka - http://www.google.com/privacy_ads.html
Raha misafidy ny mifanaraka aminay amin'ny alàlan'ny mailaka ianao, dia mety hitazona ny votoatin'ny hafatrao mailaka miaraka
ny adiresy mailakao sy ny valinteninay. Manome fiarovana mitovy amin'izany izahay amin'ireo fifandraisana elektronika ireo izay ampiasaintsika amin'ny fikojakojana ny vaovao atolotra amin'ny aterineto, mailaka ary telefona. Mampihatra izany koa rehefa misoratra anarana amin'ny tranonkalanay ianao, mifameno amin'ny alalan'ny endrika amin'ny alàlan'ny adiresy mailaka na mividy ity tranonkala ity. Raha mila fanazavana fanampiny dia jereo ny politikan'ny mailaka etsy ambany.
Ahoana no ampiasantsika ny fampitaovana omena antsika?
Amin'ny ankapobeny, mampiasa ny mombamomba ny tsirairay izahay mba hampandehanana ny asa aman-draharaha ataonay
serivisy mpanjifa ary manome zavatra hafa sy serivisy ho an'ny mpanjifantsika sy mpanjifa hoavy.
Tsy hahazo vaovao manokana momba anao ianao rehefa mitsidika ny tenanay
tranonkala, raha tsy misafidy ny hanome fampahalalana toy izany ianao, na tsy hamidy toy izany ny fampahalalam-baovao toy izany
nafindra tany amin'ny antoko fahatelo tsy nahazoan-dalana raha tsy nahazo ny fankatoavan'ny mpampiasa tamin'ny fotoana fanangonana.
Azontsika atao ny mamoaka fampahalalam-baovao rehefa voatery manao izany, amin'ny teny hafa, rehefa mino amin'ny finoana fa ny lalàna dia mitaky izany na miaro ny zontsika.
Manolo-kevitra ny hitazona ny adiresy imailakao tsiambaratelo izahay. Tsy hivarotra, hofan-trano, na handoa ny lisitry ny lisansy izahay
ho an'ny antoko fahatelo, ary tsy hanome ny mombamomba anao manokana ho an'ny olona tsirairay, governemanta
maso, orinasa, na orinasa na fotoana mety raha tsy voatery hanao izany araka ny lalàna.
Ampiasainay ny adiresy e-mail raha te hanome fanazavana amin'ny fotoana fohy momba ity tranokala ity sy ireo entana hafa / entana hafa izay mety hahaliana anao.
Hotazoninay ny fampahalalana nalefanao tamin'ny alàlan'ny mailaka araka ny lalàna federaly mahazatra.
Fepetra momba ny CAN-SPAM
Ho fanatanterahana ny Lalàna CAN-SPAM, ny e-mail nalefan'ny fikambanana tsirairay dia hilaza mazava hoe iza no mandefa e-mail
ary manome fampahalalana mazava momba ny fomba hifandraisana amin'ny mpandefa. Ankoatra izany, ny hafatra e-mail rehetra dia ahitana ihany koa
fampahalalana hentitra momba ny fanalana ny tenanao amin'ny lisitry ny mailaka, mba tsy hahazoanao mailaka fanampiny
fifandraisana avy aminay.
Safidy / hifidy-Out
Ny tranokalanay dia manome ny mpampiasa ny fahafahana misafidy ny handray ny fifandraisana avy aminay sy ny mpiara-miasa amin'ny famakiana
ireo torolàlana tsy misy soratra voarakitra an-tsisin-dàlan'ny mailaka rehetra azony avy amintsika amin'ny fotoana rehetra.
Ireo mpampiasa izay tsy te-hahazo ny gazetinay vaovao na ny fitaovam-pampandrosoana dia mety tsy handao izany
fifandraisana amin'ny alàlan'ny fanindriana ny rohy tsy misy soratra eo amin'ny mailaka.